Francisco Madeira: “AMISOM Waxay Ka Baxayaan Magaalooyin Ka Tirsan Soomaaliya” – Shabakadda Amiirnuur
November 18, 2017 8:37 am by admin Views: 115
Francisco Madeira oo ah wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya oo socdaal ku tagay saldhigga cidamada Amisom ee Baraawe ayaa sheegay in shisheeyuhu ka baxayaan magaalooyin ka tirsan dalka, socdaalkiisuna uu ku qotomo qiimeynta arrintaas.
“Qorshan wuxuu qeyb ka yahay dadaallo qiimeyn ah oo ladoonayo in Ciidamada AMISOM ay uga baxaan magaalooyin waaweyn oo dhaca Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya waxayna amniga dalka ku wareejin doonaan ciidanka Qaranka dowladda Soomaaliya” sidaas waxaa yiri Francisco Mederia.
Michael Keating oo ah Madaxa Howlgalka Q.Midoobe ee Soomaaliya oo isna Baraawe tagay ayaa sheegay in ay qiimeeyeen xaaladda dhabta ah ee magaaladan kajirta. R/wasaare Xasan Cali Kheyre,saraakiil Caddaan ah iyo Shariif Sakiin ayaa sidoo kale kalimado ka jeediyay booqashadii saldhigga Ambareeso.
Taliye ku xigeenka ciidamada AMISOM oo mas’uuliyiinta kusoo dhoweeyay socdaalka qiimeynta ah ee Baraawe ayaa ciidamada Uganda ee Sh/Hoose ka howlgala ku tilmaamay kuwa la kulmaya khataro uga imaanaya ciidamada Shabaabul Mujaahidiin.
Madeira ayaa bishii lasoo dhaafay shaaca ka qaaday in ciidamada Amisom billaabayaan iney isaga baxaan Soomaaliya kadib muddo 10 sannadood ah oo ay ka dagaalamayen. Midowga Yurub ayaa dhimay 20% (boqolkiiba labaatan) dhaqaalihii ay siin jireen Amisom, waxa kale oo batay khasaaraha soo gaaraya ciidamada midowga Afrika waana midda keentay in si aan ka leex-leexad lahayn ay ugu dhawaaqaan iney isaga huleelayaan Soomaaliya.